cholecystitis ဆန့်ကျင်3သဘာဝကကုစား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား cholecystitis ဆန့်ကျင် "3 သဘာဝကကုစား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု 19 သြဂုတ်လ 2019
Cholecystitis ဟာသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောရောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏကြောင့် ဒီအင်္ဂါအတွက်စုဆောင်းခြင်းတွက်ချက်မှု။ အခြားအလေးနက်အကြောင်းတရားများကျိတ်သို့မဟုတ်အချို့သောရောဂါပိုးရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ cholecystitis များအတွက်သဘာဝကုစားသိသလား
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ cholecystitis ဆန့်ကျင်အကောင်းဆုံးသဘာဝအလျောက်ကုစားဆွေးနွေးကြမည်: သံလွင်ဆီ, curcumin နှင့်နို့ဆူးပင်နှင့်အတူသံပုရာဖျော်ရည်ကို။ သူတို့ရဲ့စားသုံးမှုလျော့နည်းပြင်းထန်ကိစ္စများတွင်ကုသမှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကသင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်အဓိကအားအရေးကြီးပါသည်။
Cholecystitis ဟာသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောရောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောလက်ျာဘက်၌နံရိုးအောက်မှာအသည်းအောက်တွင်တည်ရှိကာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသည်းခြေ, အသည်းကနေထုတ်လုပ်တာပစ္စည်းဥစ္စာများပါရှိသည်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်အဆီ၏အစာခြေခြင်း, အစာခြေလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်။
ကြည့်ရှုရန်: 11 အသည်းအဆိပ်သင့်ဆိုင်းဘုတ်များ
သို့သော်အချို့ကိစ္စများတွင်, gallstones ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်သည်းခြေ buildup ကြောင့်ရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာပြင်းထန်တဲ့ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုအတွက်ရလဒ်များ။ ထို့ပြင်ဤတွက်ချက်မှုအရာ may ဟာသည်းခြေပြွန်, ပိတ်ဆို့ ဒါကြောင့်အချိန်အတွက်ကုသမပေးလျှင်အန္တရာယ်ဖြစ်လာသည်။
မည်သူမဆို cholecystitis ခံစားနေရပြီး၏ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်သော်လည်းအချို့သောအချက်များဆငျးရဲဒုက်ခအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဟောင်းတွေအမျိုးသမီးတွေပိုထိတွေ့လာနေကြသည်။ သည်အခြားအန္တရာယ်အချက်များရှိပါသည်:
1 ။ သံပုရာဖျော်ရည်ကိုနှင့်သံလွင်ဆီ
ပထမဦးစွာအရိုးရှင်းဆုံးသဘာဝအလျောက်ကုစား၏တဦးတည်းနှင့် cholecystitis ဆန့်ကျင်ချွေဖြစ်ပါသည် သံပုရာဖျော်ရည်ကို။ တချို့ကအဖွားကုစားဒီ Citrus အသီးများပါဝင်သည် biliary တွက်ချက်မှုပျော်ဖို့။ ထိုသို့သောသံလွင်ဆီကဲ့သို့သောအခြားဆေးဖက်ဝင်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူရောနှောအချို့ကိစ္စ၌တည်ရှိ၏။
တဦးတည်းနေတဲ့သန့်ရှင်းတဲ့အသည်းနဲ့သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သော Citrus အတူသံလွင်ရေနံနှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်ဆားလုပ်အင်တာနက်ကိုသတင်းအချက်အလက်ပေါ်ဖတ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ဒီကုထုံးကျန်းမာရေးအန္တရာယ်တွေ့ရမယ်။ ဒါဟာဆေးပညာဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုမပါဘဲဖျော်ဖြေမရသင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: ချို့ယွင်းသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သော၏ 10 လက္ခဏာတွေ
သို့သျောကြှနျုပျတို့သညျနံနကျတခုအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်ယူနိုင်ပါသည် သံပုရာဖျော်ရည်ကိုတစ်ဇွန်းနှင့်အတူသံလွင်ဆီတစ်ဇွန်း။ ကျနော်တို့အရှင်တဖြည်းဖြည်းနှင့်သဘာလမ်းများ၏အသည်းနဲ့သည်းခြေအိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအဆင်ပြေချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။
2 ။ Curcumin ဖြည့်စွက်
curcumin ဖွတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ပါးစပ်ဖြည့်စွက်ရိုက်ယူခြင်း နနွင်း, cholecystitis ၏ကုသမှုအတွက်ထိရောက်သောရလာဒ်များပြသထားပြီ။ ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့သူအများစုမှာလူနာများ3ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးတက်မှုပြသ, ဖြစ်စေအဖြစ်တွေ့နေကျမဟုတ်သောအများသည်လည်းကျယ်ဝန်းတဲ့ volume အဖြစ်တွက်ချက်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်စပ်လျဉ်း။
ဒါဟာဘာသာရပ်အပေါ်ပိုပြီးသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေထိုသို့ပုံ curcumin ဟာသည်းခြေနှင့်ဆိုင်သော၏ကျုံ့လှုံ့ဆော်ခြင်း။ ဤသည် gallstones ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလျှော့ချကိုကူညီလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်လည်း၎င်းတို့၏ကယ်ဆယ်ရေးခွင့်ပြုပါရန်။
ထို့အပြင်, ဒီဖြည့်စွက်၏အားသာချက်ရှိပါတယ် မည်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်မဟုတ်, မပင်အချိန်ကြာမြင့်စွာကုသ။ ကျနော်တို့သို့သော်ရောဂါများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအကြံပြုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဖော်ပြထားသောထိုးဆုံးဖြတ်ရန်။
3 ။ ဆူးပင်မျိုးစေ့များ
နို့ဆူးပင်တစ်ခုပျိုးပင်ဖြစ်ပါတယ် အသည်း function ကိုတိုးတက်စေရန်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်လူသိများသည်။ ထို့အပြင်၎င်း၏ထူးခြားမှုကခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ပျက်စီးသွားသောတစ်ရှူးအသစ်တဖန်မွေးဖွားကူညီနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်ရှိသည်။
Le ဆူးပင် ထို့အပြင်သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောသန့်စင်ကူညီခြင်းနှင့်တွက်ချက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဤသည် cholecystitis ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အလွန်အကျိုးရှိသောပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးပြုတ်ရည်အဖြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်အဖြစ်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏အပါအဝင်ရှာတှေ့နိုငျ တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းအာရုံ, silymarin ။
ငါ biliary colic ထံမှခံရ?
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကကျနော်တို့ biliary colic ခံစားနေရပြီးကြသည်မှန်လျှင်, ငါတို့သည်အနည်းငယ်လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာရမယ်လို့အလေးပေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်:
ရေများများမသောက်: ကိုလည်းသင် unsweetened ပန်းသီးဖျော်ရည်သောက်ရနိုငျသညျ
သင်တို့သည်လည်းသင်လိုအပ် သင်သည်အမှုရောက်သောအသက်ရှူခြင်းအန်သို့မဟုတ်ရှိသည်ဖို့စတင်ပါလျှင်နာကျင်မှုအလွန်ပြင်းထန်သောလျှင်အရေးပေါ်ဆရာဝန်ကိုသွားပါ။ ဆီးမှောင်မိုက်အညိုရောင်, မျက်လုံးသို့မဟုတ် အဝါရောင်အသားအရေ လညျးအရေးကွီးလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ဤအမှုကိစ္စများတွင်အချိန်မဖြုန်းတီးပါနဲ့!
အသည်းအကွောငျးရငျးမြားစှာအတှကျရောင်ရမ်းခြင်းမှခံရနိုင်ပြီး, အဲဒါကိုသူတို့ကိုကျော်လွှားရန်သဘာဝကနည်းစနစ်သိရန်အရေးကြီးပါသည်။ Read more »
နေလောင်ခြင်း၏အမှု၌သင်တို့၏အသားအရေပေါ့ဘယ်လိုနေသလဲ? - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ